अ’चम्मै भो ! नेपालमै एउटै पु’रुषका ४-४ ओटी श्री’मती, बि’धुवा युव’तीलाई समेत छो’डेन, रु’दै आए श्रीमती – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/अ’चम्मै भो ! नेपालमै एउटै पु’रुषका ४-४ ओटी श्री’मती, बि’धुवा युव’तीलाई समेत छो’डेन, रु’दै आए श्रीमती
काठमाडौ । कहिले सुन्नु भएको छ एउटै पु,रुषका ४, ४ ओटी श्री,मती हुन्छन भनेर, मलाई लाग्छ छैन होला तर आज हामी तपाईलो यो अ,चम्मको घ,टना बारे जानकारी दिदैछौ । जुन घ,टना हो इलामको र यि यु,वती हुन मस्कान थापा र यिनका श्रीमान जो २ बर्ष देखि ह,राईरहेका छन उनको नाम हो बल बहादुर राई ।
जो घरबाटै एककासी कहा कता बे,पता भए अ,तोप,तो केही छैन । बलबहादुर उनै हुन जस्का अहिलेसम्म ४—४ ओटा श्री,मती भईसकेका छन । जहा गयो त्यही बिहे गर्ने बानी राखेका बल बहादुर राई अहिले आफनी चौथी श्रीमतीलाई छा,डेर फ,रार भएपछि मुस्कान भनिने उनकी श्रीमती रु,दै मिडियामा आएकी छिन ।
घर परिबारबाट समेत अ,पहेल,ना बेहोर्न परेपछि श्रीमती न्या,य खोज्दै इलाम देखि काठमाडौ सम्म आएकी छिन । र हलिे टोखामा बसिरहेकी छिन । देख्दा सोझो देखिने मुस्कान कसरी तिनको जालमा परिन भनेर आफै अचम्मित छिन । हेर्नुस यति सोझो मान्छेलाई फसाउन सक्ने कस्तो खाले पुरुष होलान उनी र उनका अझै नखुलिएका अरु कर्तुतहरु के के होलान ? हेर्नुहोस यो र,हस्यम,य भिडियो —
सुगौली सन्धि अघि नै कालापानीलाई नेपाली भूभाग स्वीकार गरिएको ‘गोप्य पत्र’को खुलासा,अब के गर्ला भारत ?(भिडियो हेर्नुहोस)